Joogteynta: alaabooyinka kaa dhigaya inaad tamarta iyo biyaha badbaadiso | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
Isaac | 22/04/2022 14:53 | Kaydinta tamarta, Dhaqaalaha Guriga
El badbaadinta tamarta iyo badbaadinta biyaha Waxay fure u yihiin yaraynta saamaynta isbeddelka cimilada, ilaalinta kaydadka biyaha saafiga ah, iyo inay meeraha wanaagsan uga tagaan jiilalka mustaqbalka. Hadday siyaasiyiintu waxba qaban, hadal keliya, wax baad qaban kartaa. Qof kastaa hadduu wax qabto, dadka maamula ee wax u sheegaaya waxba ma yeelayaan. Sidaa darteed, halkan waxaan ku soo bandhigayaa qaar ka mid ah alaabooyinka kaa caawin doona inaad wax badan ku badbaadiso gurigaaga. Ma aha oo kaliya inaad yeelan doonto raad yar, waxaad sidoo kale arki doontaa sida biilasha korontada iyo biyaha ay u jaban yihiin, oo xitaa ka faa'iidayso alaab aad si fudud u tuurtay.
1 ku badbaadi biyaha qubeyska
2 Badbaadinta biyaha saxanka/musqusha
3 ku badbaadi biyaha saxanka
4 Biyaha ku badbaadi waraabka beerta
5 Ka faa'iidayso biyaha cawlan
6 Dhalooyinka biyaha macdanta ah iska ilow
7 biyaha ka hel hawada
8 Compost organic organic si loo abuuro compost
9 badbaadinta korontada
10 Kaydinta qaboojiyaha
11 Ha tuurin saliid wasakhaysan, samee saabuun
12 Ha lumin cuntada, xirmo faakuum ah
13 Maya ku dheh galaha kafeega ee hal la isticmaalo
14 Ka fogow isticmaalka gaaska kululeeyaha biyaha
15 Samee tamartaada
16 Badbaadinta biyaha si ay u buuxiyaan barkada by uumi
17 Cun ECO, caafimaadkaaga iyo wanaagga meeraha
18 Dhaqdhaqaaqa magaalada adoon qiiq la'aan
ku badbaadi biyaha qubeyska
Dooro mid badbaadinta madaxa qubeyska biyaha, kuwaas oo soo bandhiga xumbo hawada oo maamula si ay u kordhiyaan cadaadiska biyaha iyo mugga iyada oo aan kharash dheeraad ah. Waa kuwan talooyinka qaar:
Qalabka madaxa ee TATAY
Badbaadinta biyaha saxanka/musqusha
Maxaa diidaya ka faa'iidayso biyaha si aad u dhaqdo gacmahaaga, wejigaaga, ama u luqluqdo afkaaga si aad ceelka uga buuxiso? Ama isticmaal qasabad hal lever ah oo badbaadinaysa...
Wirquin 50720090 Isku darka...
ku badbaadi biyaha saxanka
oo samee isku mid ah saxanka jikadaXusuusnow in makiinada wax lagu dhaqo ee waxtarka leh ay had iyo jeer ka wanaagsan tahay in weel lagu dhaqo gacanta... iyo raaxo badan!
Roca Targa - qasabad...
Ibergrif M22109 Tubada...
Biyaha ku badbaadi waraabka beerta
Dhirta ayaa kaaga mahadcelin doonta waraabinta, laakiin hal dhibic oo kale ha isticmaalin ee waxa loo baahan yahay. Waxay u baahan yihiin biyo had iyo jeer, maaha kaliya hadda...
Nidaamka Waraabka Aiglam...
Sonkir pH mitir ee ...
Ka faa'iidayso biyaha cawlan
Si aad u awooddo ka faa'iidayso biyaha cawlanHaddii aad ku nooshahay guri waddan ah ama chalet, waxaad ku rakibi kartaa warshad sifooyin si aad ugu isticmaasho biyahan waraabka iyo baahiyaha kale. Si aad tan u samayso, u soo iibso gurigaaga warshad nadiifinta wasakhda.
Dhalooyinka biyaha macdanta ah iska ilow
Ha iibsan dhalooyinka biyaha macdanta ah oo aan ka samaysan caag oo keliya, laakiin sidoo kale leh cag sare oo CO2 ah, sababtoo ah waxay ku lug leedahay in biyaha laga soo qaado meesha laga iibiyo. Isticmaal a habka osmosis-ka roga in la cabbo biyaha tuubada oo caafimaad qaba.
Qalabka Bbagua Osmosis...
AEG AEGRO Qalabka...
biyaha ka hel hawada
Ma ogeyd inaad awoodid ka hel litir biyo ah hawada? Ma aha oo kaliya, ka faa'iidayso tamarta si aad u nadiifiso qolalka, ka fogaato caaryada, faafinta fungus, xumaanshaha alaabta, qoyaanka derbiyada iyo saqafka, ka fogaanshaha dhibaatooyinka wadajirka ah ee ay sababto qoyaanka, dhibaatooyinka neefsashada, iwm. Biyaha la helay waxaad waraabin kartaa dhirta.
Rowenta qallayl daran...
Compost organic organic si loo abuuro compost
Marar badan qolofka ukunta, godadka qaxwaha, haragga midhaha, iyo xitaa walxaha kale sida caleemaha qalalan, geedo yaryar ama hadhaaga manjooyin ayaa la tuuraa. Laakiin waxaasoo dhan waxay noqon karaan u beddel bacrimin ku habboon beertaada iyo dheriyadaada.
Skaza ka sareeya...
Marka laga soo tago inaad ka goyso dhammaan dabaysha aaladaha moobaylka, daminta waxaadan isticmaalayn, iyo kala goynta aaladaha taagan si aad u kaydsato, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa nalalka casriga ah, furayaasha si toos ah u gooya, IWM
Nalalka gidaarka ee LED...
Aigostar -8W nalka LED-ka Eeg astaamaha 2.354 Fikradaha Iibso hada
Aigostar -10 x nalka... Eeg astaamaha 785 Fikradaha Iibso hada
EXTRASTAR 12W Iftiin... Eeg astaamaha 653 Fikradaha Iibso hada
Ugu fiican	Aigostar -8W nalka LED-ka
Tayada qiimaha	Aigostar -10 x nalka...
Waxaan jecel nahay	EXTRASTAR 12W Iftiin...
Tamarta kale ee ugu weyn ee guriga ku jirta badanaa waa habka qaboojinta, hadday tahay qaboojiye ama kuleyl. Si aad u kaydsato, waxaad isticmaali kartaa heerkulbeegga smart, iyo sidoo kale hagaajinta dahaarka gurigaaga.
Xakamaynta Cimilada ...
tado ° Madax ...
Barashada Google Nest ...
Albaabada Cimilada ee ka-goynta 12M Strip... Eeg astaamaha 922 Fikradaha Iibso hada
HOOMEE dahaye la isku hagaajin karo... Eeg astaamaha 1.372 Fikradaha Iibso hada
Shaabada hoose ee... Eeg astaamaha 3 Fikradaha Iibso hada
Ugu fiican	Albaabada Cimilada ee ka-goynta 12M Strip...
Tayada qiimaha	HOOMEE dahaye la isku hagaajin karo...
Waxaan jecel nahay	Shaabada hoose ee...
Ha tuurin saliid wasakhaysan, samee saabuun
Dufanka aad ku tuurto jikada iyo soodhaha caustic waxaad ku samayn kartaa Saabuunta guryaha lagu sameeyo, si looga faa'iidaysto saliidda noocaan ah oo aad u wasakhaysan.
Gooyaha saabuunta DIY...
DIRNA Mario caustic soodhaha...
Ha lumin cuntada, xirmo faakuum ah
Ha lumin cuntada. Sannad kasta waxaa la tuuraa tan oo cunto ah, halka qaar kale oo badanna ay gaajo u dhintaan. Ka faa'iidayso hadhaagaaga oo si wanaagsan u ilaali cuntadaada.
AEG AVFK1+ | Xidhmada 3...
Maya ku dheh galaha kafeega ee hal la isticmaalo
Kaabsaloyinka kafeega ayaa aad uga qaalisan iibsashada kafeega dhan ama dhulka. Sidoo kale, isticmaalka kaabsooshahan waxa ay ka dhigan tahay in balaastig iyo aluminium laga tuuray kaabsal hore loo isticmaalay. Si aanad ugu biirin tan, haddii aad hore u haysatid mashiinka qaxwaha kaabsal, waxaad isticmaali kartaa kaabsoosha dib loo isticmaali karo oo ku rid kafeega ama faleebada aad doorbidayso.
iyo Cafilas Capsule...
iyo Cafilas Dolce Gusto...
Ka fogow isticmaalka gaaska kululeeyaha biyaha
Midkoodna Putin ama Aljeeriya, Jooji isticmaalka gaasta kuleyliyaha biyaha ee qubeyska oo leh koronto. Ma aha oo kaliya inaad ka fogaato gubashada, laakiin sidoo kale waxaad ka fogaan doontaa inaad qaadato gaas-gubiyeedka (haddii aadan haysan gaasta magaalada).
AEG 222398 DDLE aasaasiga ah...
Iibso hada Eeg astaamaha
Haddii la isticmaalayo biomass in aad soo saarto, sida caleemaha qalalan, qolof lowska, alwaax gooyn, iwm, si aad isu diiriso, ama u isticmaasho baararka qoraxda si looga dhaliyo koronto qorraxda…
Koronto dhaliyaha marawaxadaha...
Jikada shidaalka badan...
Badbaadinta biyaha si ay u buuxiyaan barkada by uumi
Xilliga xagaaga, kulaylka, xaddi badan oo biyo ah ayaa ka soo baxa barkada. Hadday arintu sidaas tahay, waad awoodaa litir badan badbaadi inta lagu jiro xilliga xagaaga adiga oo aan buuxin barkada iyada oo ay ugu wacan tahay alaabooyinkan kuwaas oo xitaa kaa caawin doona inaad xirto daadinta:
Ilaalinta nidaamka barkada...
AQUA JOOJINTA DACAYAASHA
Cun ECO, caafimaadkaaga iyo wanaagga meeraha
Dabcan, ilaali cuntadaada. Cun caafimaad leh, jidhkaaga ka ilaali sunta qaar oo ka ilaali in ay wasakheeyaan aquifers, webiyada, iyo dhul baaba'a ee dalagga.
Sidee u qortaa qoraalka:... Eeg astaamaha 146 Fikradaha Iibso hada
Sida loola safro... Eeg astaamaha 49 Fikradaha Iibso hada
VDS Eco R Garaash fog Eeg astaamaha 33 Fikradaha Iibso hada
Ugu fiican	Sidee u qortaa qoraalka:...
Tayada qiimaha	Sida loola safro...
Waxaan jecel nahay	VDS Eco R Garaash fog
Dhaqdhaqaaqa magaalada adoon qiiq la'aan
Raadi a baabuur ama hab gaadiid marka aad dhex wareegayso magaalada oo iska ilaali isticmaalka baabuurka ama mootada.
Halyeyga EBIKES ETNA Smart...
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Kaydinta tamarta » Joogteynta: alaabada lagu badbaadiyo tamarta, biyaha iyo alaabta ceeriin